Lifestyle Archives - News MM
Unicode ၁။ ကိုယ့်ဆီ ဝင်လာတဲ့ငွေရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံကို အမြဲတမ်းချန်ထားပါ။ ၂။ ကိုယ့်ဆီဝင်လာသော ငွေများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲသုံးစွဲပါ။ ငွေဝင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို သိထားဖို့လိုသလို ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို ဂဃနဏ သိထားဖို့လည်း လိုတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ထွက်နေတဲ့ လမ်း ကြောင်းတွေရှိရင် အမြန်ဆုံး ပိတ်ပစ်ရန် လိုသည် အဲဒီလို မလုပ်ရင် အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်သလို ဖြစ်နေမည်။ …
Unicode ဆရာတော်ကြီး ပြောရင် ကွက်တိမှန်ပါတယ် ဆရာ တော်ကြီးညွှန်ပြတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ မေတ္တာလေး ပွားကြရအောင် ထိုင်းမှာ ကလေးလေးတွေ ဂူထဲမှာ ပိတ်မိတုန်းကလည်း ဆရာတော်ကြီးက ပြန်တွေ့လိမ့်မယိလို့ ပြောခဲ့တာ မှန်ခဲ့ပါတယ် အခုလည်း ဆရာတော်ကြီး စကားကို သေချာလိုက်နာပါ့မယ် အရှင်ဘုရား မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ မိန့်ကြားချက် သူ့ဘာသာသူ ယတြာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း/အမိန့်ပြန်တမ်းဘယ်လောက်ပြင်းပြင်း စကြာဝတေးမင်းတောင် အမိန့်ပေးလို့မရတဲ့ နတ်မင်းကြီးနှစ်ပါးရှိပါတယ်။ (၁)လောကပါလ …
Unicode 30/4/21. မေလဆန်းအထိ မုတ်သုန်အကြိုမိုးများ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအနှံ့အပြား ရွာနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ယခုလိုကာလသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပူပြင်းသောကာလ ဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အတွင်းမှ ပူ၍စိုစွတ်သော လေများကို မြေပြင်သို့ ဆွဲခေါ်နေသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ မြေပြင်မှ အပူငွေ့တို့သည်လည်း အပေါ်သို့ပျံ့တက်၍ ညနေပိုင်း မိုးတိမ်တောင် ဖြစ်ထွန်းသည့်ကာလ ဖြစ်သည်။ ဤကာလအတွင်း မိုးကြိုးမုန်တိုင်း လျှပ်စီး မိုး မိုးသီး ရုတ်တရတ်လေပြင်းတို့ …
Unicode မင်္ဂလာပါ ယခု တင်ဆက် ပေးသွားမယ့် အကြောင်းလေးကတော့ အရမ်းကိုမှ အခက်ခဲ ဖြစ်နေကြတဲ့ သာကေတ နဲ့ တောင်ဒဂုံ ကြားက ကျူးကျော်တဲလေး အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၅၀ ဟာ ထမင်းခြောက်ကိုတောင် ရေဖျော်ပြီး သောက်ရတဲ့ အထိကိုတောင် ဒုက္ခရောက် နေကြတဲ့ အကြောင်း လေးပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ယင်း ကျူးကျော် နေအိမ်လေးတွေမှာနေထိုင်သူတွေဟာ …
ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ရင်ကွဲမတတ်ခံစားနေရတဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်
Unicode အဆိုတော် ပန်းရောင်ခြယ်ကတော့ အသံအေးအေးလေးနဲ့ တေးသီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေးသား သီဆို သူတစ်ဦး ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း ကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်များကို ကမ္ဘာမှသိစေရန် speak out လုပ်ပေး နေ တာ …
ပါချုပ်ဆရာတော် ဘုရားကြီးက သစ္စာပြုဆုတောင်းစကား ဆိုလိုက်ပါပြီ
Unicode လက်ရှိကာလအတွက် ညနေဘုရားဝတ်ပြုပြီးတိုင်းတွင် မောရသုတ်နှင့် ပစ္စယနိဒ္ဒေသပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်များကို အထူးပြုကာ ရွတ်ဆိုပူဇော်လျက် ရှိကြသည်။ ယခုကဲ့ သို့ ရွတ်ဆို ပူဇော်ကြရသည့် ၁။ မေတ္တာစွမ်းအား ၂။ သစ္စာစွမ်းအား ၃။ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်အစွမ်းများနှင့် ၄။ #ဓမ္မသဟာယ၏ ဓမ္မပူဇာ ဓမ္မသစ္စာကြောင့် လက်ရှိကာလတစ်လျှောက် ကြုံတွေ့ကြ ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအားလုံး၏ ရင်တွင်းအပူလှိုင်းများ အလျှင်အမြန်ဆုံး ငြိမ်းအေးကြရပါလို၏ငြိမ်းအေး …
(၂၅) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး
အထူးဆုကြီး စနစ် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး (၁) ဆု ဇ ၉၈၂၂၆၃ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး (၁) ဆု မ ၆၉၈၂၆၆ ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး (၁) ဆု ဠ ၃၄၉၉၆၉ ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီး (၁) ဆု ဓ ၇၃၁၃၃၄ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး (၂) ဆု ဎ ၄၁၀၃၄၈ စ ၉၈၃၀၉၉ ဆုတစ်ဆုချင်းစနစ် …
လက်ရှိပျံ့နှံ့နေတဲ့ အသံဖိုင်မှာသူ့အသံအစစ်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဟဝန်ခံရင်း တသက်လုံး အနုပညာဆက်လုပ်စားလို့ မရတော့ဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော် ယုန်လေး
Unicode ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်ယုန်လေးကတော့ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားအတွက်ပြန်လည်တောင်းပန်စကားဆိုလိုက်ပြန်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူ့ရဲ့ အမှားများဟာလည်း ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာကိစ္စဖြစ်နေတာကြောင့် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ရှုံ့ချခြင်းတွေ ခံနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အသံဖိုင်က ကျွန်တော့် အသံပါဝန်ခံပါတယ်။ အသံဖိုင် က ကျွန်တော့် အသံပါ ဝန်ခံပါတယ် . ကျွန်တော်တောင်းပန် တယ် ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မလုံလောက်ဘူး . …
Unicode မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ဒီကနေ့မနက်မှာ “ ရုပ်ရှင်သည် ပြည်သူ့အတွက်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် “ ရုပ်ရှင်သည် ပြည်သူ့အတွက်” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ရပ်တည်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရုပ်ရှင်သည် ပြည်သူ့အတွက်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ Civil Disobedience ပြုလုပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများနဲ့အတူ ပြည်သူအတွက် ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ဒီကနေ့ …
Unicode မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို နှောင့်နှေးသွားစေမည့် အခြေအနေကို ဦးတည်စေသော တပ်မတော်၏လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းများ အပေါ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မိပါသည်။ သတင်းများ အရ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အရပ်ဘက် အရာရှိများအားလည်း ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သိရပါသည်။ ဤအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍သမ္မတ Joe Biden အား အမျိုးသား …